Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 29, 2018 00: 30 No Comments
Su'aasha biyaha marwalba aad ayey muhiim u ahayd maadaama awoowayaasheen ay muujiyeen tan « Meecaad-Mata », taas oo ah in la yiraahdo xisaabinta, sayniska laga dhaxlay tan iyo tan Ishango on xeebaha Lake Edward. Halkaas ayaa ah meeshii Aadamigu ka yimid Biyo ama ka timid « Nun », iyo in jirka bini-aadamka aasaas ahaan loo sameeyay.
Sidaas awgeed biyaha ayaa loo isticmaalaa in lagu joogteeyo jir ahaan, maskax ahaan iyo xitaa caafimaad ahaanba ruuxiyan ah, maxaa yeelay waxay xaqiijisaa xaqnimada jirka bini-aadamka, isku-dheelitirnaantiisa: sidaas Maat.
Tani waa sababta sababta Ngangu ya Ntima (garaadka wadnaha, Kikongo) waa inay nadiif ahaataa, waa caafimaad, inay noqoto iftiin sida baalasha Meecaad isku dheelitirka caddaaladda; Maaddaama fikirradu ay marka hore ka yimaadaan qalbiga, sida ku xusan dhaqankeenii hore.
Sep29 04: 01